Itoobiya: inkabadan kun qof ayaa la xiray tan iyo intii lasoo rogay xaaladda degdega - BBC News Somali
Itoobiya: inkabadan kun qof ayaa la xiray tan iyo intii lasoo rogay xaaladda degdega
1 Abriil 2018
Mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ayaa sheegay in inkabadan kun qof xabsiga loo taxaabay tan iyo intii xaaladda degdega lagu soo rogay dalkaasi muddo bil kahor.
Dadka la xiray ayaa waxaa la sheegay inay kamid yihiin dhowr weriye oo dhawaan la soo daayay, kadib markii ay xirnayeen in muddo ah. Sababata loo xiray dadkani ayaa lagu sheegay inay ku dhaqaaqeen rabshado iyo inay xireen wadooyin.
Kooxaha u ololeeya xuquuql insaanka ee dalkaasi ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya in xaaladda degdega aysan u adeegsanin caburinta weriyeyaasha. Sannadkii 2016-ka, kumanaan qof oo ka qeyb galay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda ayaa la dhigay xabsiyo ku yaala dalkaasi.
Dad badan oo u dhashay Itoobiya ayaa rajeynaya in magacaabista raysal wasaaraha cusub ay horseedi doonto xasilooni siyaasadeed iyo degenaansho dalkaasi ka dhacday, kadib markii uu iscasilay raysal wasaarihii hore ee dalkaasi.
7 Agoosto 2020
Khaladaadkii nuclear-ka ee lagu burburin gaadhay adduunka
Dalkee heysta keydka ugu badan ee dahabka adduunka?
Maxay tahay sababta khilaafka Sharciga Dembiyada "Galmada" la xiriira ee Soomaaliya?
Jaajuuskii Mareykanka ahaa ee bixiyay sirta nuclear-ka ka dibna baxsaday
Hadal laga sheegay Nabi Muxammad (NNKH) oo sababay dhimasho